Baasaboorka mideysan ee Afrika oo maanta sanad jirsaday,xagguu ku dambeeyay? | Mustaqbal Radio
Wasiir Beyle “Lacagtii Imaaraatka ee Garoonka lagu qabtay, Dowladda Sas-bey ka qaaday”.
Goormee ayaa lagu dhawaaqayaa Guddiga Qaban-qaabada Doorashada Guddomiyaha Baarlamaanka?
Wasiir Beyle oo Rajo ka muujisay in Deemaha laga Cafiyo Soomaaliya.
Guddiga Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo maanta lagu dhawaaqayo.
Guddiga Difaaca Baarlamaanka oo Sharaxay Sharciga Xaq-siinta Ciidanka.
Home - Wararka Somalia - Baasaboorka mideysan ee Afrika oo maanta sanad jirsaday,xagguu ku dambeeyay?
Baasaboorka mideysan ee Afrika oo maanta sanad jirsaday,xagguu ku dambeeyay?
July 17, 2017	25 Views
Baasaboorka mideysan ee Qaaradda Afrika ayaa maanta sanad jirsaday kaddib markii ay adeegsigiisa isku raaceen Madaxda AFrika oo shir madaxeedkoodii 27aad ee Kigali ka dhacay Sanadkii hore.
Shirkii Kigali ee dhacay July 2016kii ayaa la iskula qaatay in la sameeyo Baasaboor mideysan oo ay yeelato Qaaradda Afrika,waxaana madaxdii ugu horreysay ee qaatay ka mid ahaa Madaxweynaha Dalka Rwanda Paul Kagame,oo shirkaas marti gelinayay iyo Guddoomiyaha Midowga Afrika ahna Madaxweynaha Chad Idris Deby.
Madaxda Afrika ayaa xilligaas isku raacay in Baasaboorka soo saaristiisa ay billaabato Sanadka 2018ka ka horna qeybtiisa Diblomaatigga la siiyo Madaxweynayaasha AFrika,Wasiirrada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta sar sare.
Wali lama sheegin Dal ka mid ah Afrika oo billaabay hanaanka soo saaridda Boosaboorka Qaaradda Afrika,waxaana ay dood ka taagan tahay qaabka loo qaadamayo,Tirada Waddamada laga furayo xafiisyada bixinta Baasaboorrada iyo Fiisaha Afrika.
Guddiga Madaxa Banaan ee Xuduudaha “Kenya Kama yeeli doono in ay dhisato Dhulka Soomaaliya”.
Wasiir Beyle “Lacagtii Imaaraatka ee Garoonka lagu qabtay, Dowladda Sas-bey ka qaaday”. April 20, 2018
Goormee ayaa lagu dhawaaqayaa Guddiga Qaban-qaabada Doorashada Guddomiyaha Baarlamaanka? April 20, 2018
Xulka Da’yarta Dalkeena Soomaaliya oo gaaray Wareega Semi-Finalka Tartanka (CECAFA U17) April 20, 2018
Wasiir Beyle oo Rajo ka muujisay in Deemaha laga Cafiyo Soomaaliya. April 20, 2018
Guddiga Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo maanta lagu dhawaaqayo. April 20, 2018
Guddiga Difaaca Baarlamaanka oo Sharaxay Sharciga Xaq-siinta Ciidanka. April 20, 2018
Guddiga Madaxa Banaan ee Xuduudaha “Kenya Kama yeeli doono in ay dhisato Dhulka Soomaaliya”. April 20, 2018
Dhageyso: Wasiiro katirsan Xukuumada Somaliya oo ka qeybgalay shirka Bankiga Aduunka. April 20, 2018
Maamulka Gobolka Banaadir oo canshuur ka qaadaya guryaha Magaalada Muqdisho. April 20, 2018
Ciidamada Somlailand oo xalay Hoteel kala baxay Boqor BUUR-MADOW April 20, 2018
SAWIRRO: Taliye Gorod oo ka qeybgalay shirweynaha Talisyada Ciidanka Africa iyo Mareykanka April 19, 2018
Golaha Wasiirada oo ka arinsaday xaalada kala guurka ee bixitaanka Ciidanka Amisom April 19, 2018
Goormee ayaa lagu dhawaaqayaa Guddiga Qaban-qaabada Doorashada Guddomiyaha Baarlamaanka? https://t.co/AoBEfrbZUO 3 hours ago
WARKA HABEEN https://t.co/5WuWXVIlF6 4 hours ago
WARKA GALAB https://t.co/oLGNI7IZnU 9 hours ago
Wasiir Beyle oo Rajo ka muujisay in Deemaha laga Cafiyo Soomaaliya. https://t.co/qVridyNAnd 9 hours ago
Guddiga Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka oo maanta lagu dhawaaqayo. https://t.co/XMafhpze0l 10 hours ago
Xulka Da’yarta Dalkeena Soomaaliya oo gaaray Wareega Semi-Finalka Tartanka (CECAFA U17)
Dhageyso: Wasiiro katirsan Xukuumada Somaliya oo ka qeybgalay shirka Bankiga Aduunka.
Maamulka Gobolka Banaadir oo canshuur ka qaadaya guryaha Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Somlailand oo xalay Hoteel kala baxay Boqor BUUR-MADOW